INTERNET EXPLORER ANAGHỊ AMALITE - INTERNET EXPLORER - 2019
Isi Internet Explorer
Nsogbu na Internet Explorer. Nyocha na nsogbu
Photoshop taa bụ otu n'ime ndị nchịkọta kachasị mma, nke ị nwere ike ịhazi foto site na ịpịpụta, ibelata, wdg. Ihe kachasị mkpa, ọ bụ ụdị ngwaọrụ ndị e mepụtara maka ụlọ ọrụ.
Photoshop bụ usoro ịkwụ ụgwọ nke nwere ọtụtụ atụmatụ ma nwee ike inye aka maka ndị na-emepụta novice. Otú ọ dị, nke a abụghị nanị usoro ihe omume, enwere ihe ndị ọzọ dị mfe ma dị mfe iji.
Maka iji ya tụnyere Photoshop, ị nwere ike ịtụle ma ọ dịkarịa ala mmemme arụ ọrụ, ghọta ihe uru ha na ụkọ ha dị. Ọ bụrụ na anyị na-atụle ọrụ nile nke Photoshop, mgbe ahụ, ikekwe, ọ gaghị ekwe omume ịchọta ihe dịka pasent 100, ma anyị na-atụ aro ka ị mara onwe gị na ha.
Were ihe atụ Gimp. A na-ewere usoro a dị ka ihe kachasị adaba iji. Na ya, ịnwere ike inweta foto dị elu maka n'efu.
N'ụlọ agha nke usoro ihe omume ahụ, e nwere ọtụtụ ngwá ọrụ dị mkpa ma dị ike. E nwere ngosị dị iche iche maka ịrụ ọrụ, tinyekwara interface dịgasị iche iche.
N'ịbụ onye ndị ọkachamara ọkachamara zụrụ, ị ga-enwe ike ijikwa ihe omume ahụ n'oge dị mkpirikpi. Uru ọzọ bụ ọnụnọ na nchịkọta akụkọ nke usoro ndị nwere ọgụgụ isi, ya mere, site n'echiche nke oge ọ ga-ekwe omume igosipụta ike gị n'ịbịaru saịtị.
Agba. NET bụ onye nchịkọta akụkọ na-enweghị ihe ọ bụla nwere ike ịkwado ọrụ dị iche iche. Ihe dị iche iche pụrụ iche na ọtụtụ ọrụ bara uru ma dị mfe.
Ọbụrụ na ihe isi ike, ị nwere ike ịrịọ maka enyemaka na obodo weebụ. Agba. NET na-ezo aka na ndị ogbochi free, ọ nwere ike na-arụ ọrụ na Windows usoro.
PIXLR bụ onye nchịkọta asụsụ dịgasị iche iche nke oge a. N'ụlọ agha ya, e nwere ihe dị ka asụsụ 23, nke na-eme ka ike ya dịkwuo elu. Usoro mmemme na-enye gị ohere ịkwado ọrụ na ọtụtụ ọkwa na nzacha ma nwee ngwaahịa dị iche iche pụrụ iche, na-eji nke ị nwere ike imeta ihe oyiyi zuru oke.
PIXLR - dabere na nkà na ụzụ nke oge a, a na-ewere ya dị ka onye kasị mma n'Ịntanet niile. Ngwa a bara uru maka ndị na-amalite na ndị nwere obi ike.
Mkpọkọta ihe - Nke a bụ onye nchịkọta akụkọ nke nwere ikike ịdegharị foto. Na ya, ị nwere ike ịmepụta logos na ọkọlọtọ, yana iji eserese dijitalụ.
Ihe na-agụnye otu setịpụrụ ngwaọrụ, na analog a bụ n'efu. Ọrụ adịghị achọ nhazi na ndebanye pụrụ iche. Ị nwere ike iji nchịkọta akụkọ site na njikọ na ihe nchọgharị ọ bụla na-akwado Flash. A pụrụ ịzụta ụdị analogue nke a na-akwụ ụgwọ maka $ 19.
Onye nyocha foto Canva
Onye nyocha foto Canva ejikwa iji dezie ihe oyiyi na ihe oyiyi. Ihe ndị bụ isi ọ na-eme bụ ịmaliteghachi, na-agbakwụnye ihe nzacha ma dozie ọdịiche dị na sekọnd ole na ole. Enweghị nbudata na aha ị chọrọ iji malite.
O doro anya na ọ dịghị nke analogs Photoshop nwere ike ịghọ onye na-anọchite anya prototype 100%, ma obi abụọ adịghị ya, ụfọdụ n'ime ha nwere ike ịghọ onye na-agbanwe maka ọrụ ndị dị mkpa maka ọrụ.
Iji mee nke a, ọ dịghị mkpa ọ bụla iji meefu ego gị, naanị ị chọrọ iji otu n'ime analogues. Ị nwere ike ịhọrọ nhọrọ kwesịrị ekwesị dabere na mmasị gị na ọkwa nke professionalism.
https://termotools.com ig.termotools.com © Internet Explorer 2019